Har’as ABOn Furmaata Siyaasaa karaa Haasawaa Argamsiisuuf Hojjatuu itti Fufa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHar’as ABOn Furmaata Siyaasaa karaa Haasawaa Argamsiisuuf Hojjatuu itti Fufa!
(Ibsa ABO – Adoolessa 31,2018)
(SBO/VOL – ADOOLESSA 31,2018) Har’as ABOn ejjennaan karaa haasawaa rakkoo siyaasaa jiru furuuf jecha labsiin dhukaasa dhaabuu labse kan itti fufu tahuu mirkaneessaa, mootummaan lola ABO irratti labse kaasuuni fi waraana bobbaase dachaasuun furmaata haasawaa fi araara buusuuf marii eegalame shaffisaan xumura akka argatu dandeessisuu irratti akka hojjatu irra deebi’ee yaadachiisa. Lubbuun tokkollee darbuu itti fufuun kasaaraa fi kan hiika hin qabne tahuu gadi jabeessee mootummaa hubachiisa.
Bittaa cunqursaa fi saaminsaa baroota dheeraaf ummatoota Itoophiyaa irratti humnaan fe’ame karaa nagaa furuuf yeroo garagaraatti yaaliin taasifamaa ture sababa bittootaan fashaluu irraa ummatoota gara qabsoo hidhannoo fi siyaasaa, akkasumas fincilaatti dhiibee Itoophiyaa nagaa dhabsiise. Boora’iinsi nagaas cunqursaa fi saaminsa irra hammaataaf ummatoota saaxilee nagaan waliin jiraachuu irratti dhiibbaa ulfaataa dhalchuu haalli Itoophiyaa keessatti mul’atu ifatti agarsiisa.
Misoomaa fi guddina galmeessuu dhaan jireenya ummatootaa gadadoo keessaa baasuuf hundaan olitti nagaa waaraa argamsiisuun murteessaa dha. Nagaa waaraa argamsiisuunis akeeka jaarmoota siyaasaa ummatootaaf dhimmanii ti. ABOn kan nagaa irra dursu hin qabu. Mirga ummata Oromoo kabajsiisuuf kan falmaatti seenes dirqamee ti malee qabsoo hidhannoo filannoo duraa godhatee ti miti.
Qabsoo bilisummaa Oromoof adeemsifamaa ture keessatti lammiileen Oromoo qaqqaalii kumaatama hedduun lakkaawwaman irratti wareegamaniiru. Miidhaaleen garagaraa irra gahanis ulfaatoo dha. Baroota as dhihoo ammoo ABO, ummatni Oromoo bal’aani fi Qeeerroon Bilisummaa qaama furmaataa tahuuf murannoon qabsoon geggeessaa turanii fi jiran firii ummata Oromoo qofti argu qofa osoo hin taane ummatootni cunqurfamoo hundi argan argamsiise. Kanas galmaan gahuuf qabsoon itti jiramu milkaa’uu irratti ABOn shakkii hin qabu.
Labsi dhukaasa dhaabuu ABOn Adoolessa 12, 2018 labsame jijjiirama qabsoo Qeerroo Bilisummaa fi humnoota qabsoo kaaniin Itoophiyaa keessatti mul’ate milkeessuu fi furmaata nagaaf hiree argamsiisuu kan akeekkate tahuun hubatamaa dha. Haa tahu malee gama mootummaa Itoophiyaan deebiin dhukaasa dhaabuu argame quubsaa hin taane.
Goleelee Oromiyaa garagaraa keessatti humni waraanaa fi poolisaa bobbaafame maqaa WBO sakattaanaan lolli itti fufuun bakkaa bakkatti lubbuun darbuu ammallee mul’ata. Kun qaama kamiifuu kan bu’aa hin qabne tahuu ABOn ni amana. Gama mootummaa irraa tarkaanfii fakkaataan dhabamuu irraa ABO fi ummata Oromoo nagaaf dursa kennanii jiran shakkii keessa kan seensise dha.
Har’as ABOn ejjennaan karaa haasawaa rakkoo siyaasaa jiru furuuf jecha labsiin dhukaasa dhaabuu labse kan itti fufu tahuu mirkaneessaa, mootummaan lola ABO irratti labse kaasuun fi waraana bobbaase dachaasuun furmaata haasawaa fi araara buusuuf marii eegalame shaffisaan xumura akka argatu dandeessisuu irratti akka hojjatu irra deebi’ee yaadachiisa. Lubbuun tokkollee darbuu itti fufuun kasaaraa fi kan hiika hin qabne tahuu gadi jabeessee mootummaa hubachiisa.